Q-14aad ee shaakadii Hirjacayl
maxamedsheekafguun Abriil 3, 2020 sheekooyin
Ka dib markaan intaas is waydaarsanay ayaan isku dayay bal inaan inantayda Hibo laab qaboojin uga dhigo erayo samirsiin ah waxaana ka idhi; Aabbo Hibo ha la yaabin xidhiidhka iyo jacaylka aad ku guuldarraysatay markii horeba adigu awood aad leedahay kumaad samayn ee waxay ahayd qoraal Alle, iminkana Alle ayaa idin kala kexeeyay, marka Aabbo ha u cadhoon qoraalka Alle.
Nolashu farxad iyo dhoollacaddayn badan bay inaga rabtaa se Aabbo nolashu uma baahna welwel iyo cadho joogta ah.
Wixi maalinkaa ka dambeeyay Hibo waxay noqotay gabadh u nugul dhib kasta oo soo gaadha, wakhti xaadirkana xaaladeeda caafimaad maaha mid wanaagsan sababo badan awgood, waxyaabaha ugu waawayn ee aan anu isku eedeeyo ayaa ah in aan inantayda u ogolaan waayay tixgalina siin waayay rabitaankeeda nolasha, sida in ay iyadu dookheeda guursato dhib kasta oo maanta taagan badanaa waxaan u aaneeyaa in ay tahay wax aan masuul ka ahay billawgeeda.
Gobanimadu maaha inuu aabbuhu inantiisa u adeegsado awood. Awood waalid nimo, raganimadu iyo dadnimaduna, maaha in aad qayb adiga kaa mid ah ahna gabadhaada aad adu dhashay, ku baddalato ama aad ka door biddo lacag uu sito nin qurbajoog ah, oo uu ka sharaf iyo magacba sarreeyo kan dalka jooga. waxay ka mid tahay waxyaabaha aan ka bartay inta aan ku guda jiray hammigii ahaa, ‘Waad lacagaysan doontaa, ee inantaada ku dar nin qurbajoog ah’.
Ma ogtahay aabbo
Dhibka iyo dhabarjabka ku dhacaya inantaada haddii aad ku darto nin aanay iyadu raalli ka ahayn ogow adu matihid qofka rajada iyo mustaqbalka dambe qaba, ee waa iyada qofka la rabo in ay meel marin ku samayso aauaha dambe, iyo mustaqbalkeeda. Allaha ku dhawree aabbo dhawr xuquuqda iyo rabitaanka ubadkaada.